Wax ka baro howlaha xubnaha ProZ.com
Dhacdooyinka qadka ku jira ama ka maqan
Fadhiyada tababarada qadka ku jiran ama ka maqan waxay turjumaanada iyo dadka kaleba ugu deeqaan tababar xirfad leh ee ku jira shaqooyinka gaarka ah ee luuqada. Fadhiyadan waxaa gaarsiinaya xirfadlayaal leh qibrad cad oo meelaheeda leh.
Hab maad leh oo lagu nasto ee ka imaanaya waxyaabahaaga joogtada ah iyo tijaabadaada - iyo soofeynta - xirfadahaaga oo ay la jiraan asxaabtaada.
Isku xirnaanta ProZ.com Certified PRO waa hindiso ay leedahay bulshada ProZ.com, ujeedo ah in la cadeeyo turjumaanada tayada leh iyo shirkadaha turjumaanada ee ka shaqeeya luuqada labalabada, kuna deeqeysa kala xulasho leh isku duubnida iyo ka wadashaqeynta deegaanka ka kooban xirfadlayaal gebi ahaantooda la soo wada baaray. Kuwa loo oggolaaday barnaamijka waxay helayaan "ProZ.com Certified PRO" magacsiin iyo shaabad, taasoo haddii laga doorbido lagu soo bandhigi karo boggaga taariikh nololeedka iyo meelo kaleba shabakada ProZ.com hadey qadka ku jirto iyo haddii kaleba.
Madasha dooda xirfadeysan
Madasha dooda ProZ.com waa dood u furan isticmaalayaasha ProZ.com si ay uga wada doodaa mowduucyada dan wadaagta ee la xiriira hanaanka aan dhisneen.
Ku soo biir madasha
Barnaamijka u naseexeynta ProZ.com waa hindise loogu talogalay inay ku deeqdo micne xubinimo buuxda si loola kulmo xubnaha kale ee sida wanaagsan oo ku filan ugu abaabulan inay qaataan barbaradnimada.
Wax badan ka baro barnaamijka u naseexeynta ProZ.com
Daawo turjumaada fiidiyowga ah
Turjumaada fiidiyowga ah sida aqoon-isweydaarsiga internetka ah, naqtiimin, fadhiyada tababarka, shir fiidiyowga iyo waxyaabo badan.